DRC: Khilaafka ku saabsan mushahar bixinta ee xubnaha dowladda ee ka sii baxaya - JeuneAfrique.com - SAAXIIBADA CIIDAMADA
ACCUEIL » SIYAASADDA DRC: Khilaafaadka ku saabsan bixinta mushaarka ee xubnaha dowladda ka baxa - JeuneAfrique.com
Raiisel wasaaraha Congo Bruno Tshibala. . V.Fournier / JA
Dhamaan xubnihii dowlada ka hadashay waxay heleen dhamaan mushaharkoodii shaqada, oo ay kujiraan wasiirradii 19 ee wali xafiiska. Haddii muranku kicinayo xanaaqa bulshada dhexdeeda, dabaqadda siyaasadeed waxay si xun u qarisaa ceebteeda.
In kasta oo wax waliba ay u muuqdaan inay tilmaamayaan taas DRC, wadaxaajood dheer oo adag oo ku saabsan samaynta dowlada ugu dambeyntiina waxay galeen fidinta guriga, lix bilood ka dib caleema saarkiisa Felix Tshisekedi, waa muran in si wanaagsan ay u gaari laheyd ciyaartoydii ugu fiicneyd goobta siyaasada Kongo. Iyo gaar ahaan xubnaha dawladda ka socda. Sida xogta aan kuheleyno, kan dambe - ooy kujiraan kuwa iscasilay ilaa iyo - waxay heleen dhamaan lacagaha mushaarkooda, halka kooxda cusub aan wali lasoo magacaabin.
Mid kasta oo ka mid ah wasiirrada 59 - oo ay ku jiraan 19 oo hadda ah xafiiska, badankood oo is casilay inay u fadhiyaan senetka ama Golaha - waxay heleen mushahar u dhigma lix bilood mushaharka. Qiyaasta 15 000 dollars bishii, mid kasta oo ka mid ah wasiirrada wuxuu helay baqshad wadarta ah ee $ 90 000 dollars. Qaybtii ugu horreysay ee lacagtan ayaa horay loo siiyay iyaga bishii Diseembar 2018, dhexda xilliga doorashada kadib. Qaybta labaad waxaa loo qoondeeyey iyaga inta u dhaxaysa 1er iyo Agoosto 12, oo ay la socdaan gaari.
[Tribune] Maxaa Emmanuel Macron ay tahay inuu dhaho joogsiga Alpha Condé - JeuneAfrique.com